Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Jarmalka
Jarmalka waa wadan ay tahay in lagu ogaado taariikhdiisa dheer iyo fursadaha waxbarasho ee tayada leh. Sidoo kale waa mid ka mid ah wadamada soo galootiga ugu badan qaarada yurub, madaama ardaydu si sahal ah u heli karaan waxbarasho isla markaana ardayda siin karaan xaalado nololeed oo ku haboon xaga dhaqaalaha iyo anshaxaba.
Iyada oo maqaalka cinwaankiisu yahay Macluumaad Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Jarmalka, waxaan dooneynaa inaan ka hadalno Jarmalka oo leh dhinacyadiisa kala duwan ee dad badani aysan aqoon, halkii laga sameyn lahaa hordhac guud oo ku saabsan Jarmalka.
Jarmalka waa Dhulkii Mufakiriinta, Gabayaaga iyo Fanaaniinta
Waxaan soo sheegnay in Jarmalku leeyahay taariikh fog. Wadanka oo martigaliyay saynisyahano fara badan, falsafado, abwaano iyo fanaaniin waqtiyadii hore ilaa maanta, wuxuu leeyahay tiyaatarka magaalada, matxaf, maktabad, dhismaha kooxda muusikada iyo qolalka farshaxanka oo muhiimad caalami ah leh Farshaxanno caan ah sida Beethoven, Wagner, Bach, iyo Brahms ayaa door ka ciyaaray kororka muusikada casriga ah ee dalka. Mufakiriin badan sida Karl Marx, Nietzsche iyo Hegel ayaa nolol ku keenay wadanka iyagoo wata dhaqdhaqaaqyadooda falsafad.
Waa waddanka lagu qabto xafladda dad weynaha adduunka ugu weyn
Bandhigga Oktoberfest, oo ah kan ugu weyn adduunka, waxaa sanad walba si joogto ah loogu qabtaa magaalada Munich ee dalka. Dabbaaldegga, oo soconaya bilaa dhibaato ilaa 1810, wuxuu bilaabmaa usbuuca ugu dambeeya Sebtember wuxuuna dhammaadaa usbuuca koowaad ee Oktoobar.
Waa waddanka ay ku taal cathedral-ka adduunka ugu dheer
Jarmalka waxay martigalisaa dalxiisayaal badan sanad walba qaab dhismeedka joomatari. Meelaha ay booqdaan dalxiisayaashu waa Cologne Cathedral, kaniisada ugu dheer adduunka, dhererkeeduna yahay 161 mitir iyo 768 tallaabo.
Wadan leh abaalmarinno badan oo Nobel ah
Jarmalka wuxuu uqalmay 102 Abaalmarinta Nobel guud ahaan dhinacyada suugaanta, fiisigiska, kiimikada iyo nabadda. Tani waxay muujineysaa sida tayada sare leh ee u jecel sayniska iyo farshaxanka dalku dhab ahaantii yahay. Xaqiiqda ah in aqoonyahanno gaaraya 45 oo dalka gudihiisa lagu siiyay abaalmarinta Nobel Prize ay tahay tan ugu fiican tan.
Haddii uu jiro mowduuc aad rabto inaad ka aragto bartayada, waad noo soo sheegi kartaa adiga oo ku qoraya aagga kulanka.
# Jarmalka waa Dhulkii Mufakiriinta, Gabayaaga iyo Fanaaniinta
# Waa waddanka lagu qabto xafladda dad weynaha adduunka ugu weyn
# Waa waddanka ay ku taal cathedral-ka adduunka ugu dheer
# Wadan leh abaalmarinno badan oo Nobel ah